Mailjet ebido A / X Nnwale ihe ruru 10 Versions | Martech Zone
Mailjet na-ebido Ule A / X site na iji 10 Versions
N'adịghị ka ule A / B, Mailjet si Nnwale A / x na-eme ka ndị ọrụ gafee-tụlee ruo 10 ụdị dị iche iche nke ozi ịntanetị nyocha ezitere dabere na ngwakọta nke ihe mgbanwe anọ dị anọ: Isiokwu Isiokwu Email, Ziri ozi aha, Zaghachi Aha, Na ọdịnaya email. Njirimara a na-enye ụlọ ọrụ ohere ịnwale ịdị adị nke email tupu eziga ya na nnukwu ìgwè ndị nnata, ma na-enye ndị ahịa nghọta nwere ike iji aka ma ọ bụ na-akpaghị aka họrọ ụdị email kachasị dị mma iji zipu ndị nnata fọdụrụ na listi ha.
Nkọwapụta Mgbasa Ozi nke Mailjet na-enye ndị ahịa ike iji nyochaa ihe ruru 10 mkpọsa gara aga n'otu akụkụ, yabụ ndị ọrụ nwere ike ikpebi nsonaazụ mgbasa ozi ngwa ngwa karịa oge ọ bụla karịa ma ọ dị mfe ịbanye na mkpọsa kachasị dị irè kwa izu, ọnwa ma ọ bụ afọ.
Nchịkọta A / X na nzipu
A / X Real-oge Ule Nsonaazụ
Nsonaazụ Ule A / X
Ngwakọta ngwakọta nke ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịmekọrịta mkpọsa yiri nke ahụ ọnụ, dịka ozi ire ere kwa ọnwa ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ kwa izu, ma nweta nghọta miri emi na ozi ịhazi oge niile ma ọ bụ nke cyclical. N'iji atụmatụ ndị a ọnụ, ndị ahịa ga-enwe ozi niile ha chọrọ iji mee mkpebi email kachasị amamịghe maka azụmaahịa ha, dịka oge kachasị mma nke afọ iji hazie ọkwa ndị mara ọkwa ma ọ bụ kwadebe nnukwu ọrịre ọzọ.
Na mgbakwunye na njirimara ntụnyere, Mailjet na-akwado nkewa (na-enye ndị ọrụ ohere iziga nsụgharị email dị iche iche na kọntaktị dị iche iche), ịhazi onwe (na-eme ka email ahụ ọ bụla kọntaktị ọ bụla), ma gbakwunye API mmelite maka ijikọ na sistemụ njikwa njikwa, ngwa, weebụsaịtị na CRMs.
Tags: ule uleanwale uleỌdịnaya Emailemail isiokwuemail isiokwu akaranyocha emailmailjetkeonwezaghachizaghachi ahankewaziri ozionye nzipu ozi ahaisiokwuUsoro isiokwu
Vidio: Usoro 5 iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma